Cabaas Idirs (Ex John Drysdale) oo qaatay Diinta Islaamka ayaa ku dhintay Hargeysa(SOMALIA) | Voice Of Somalia
Cabaas Idirs (Ex John Drysdale) oo qaatay Diinta Islaamka ayaa ku dhintay Hargeysa(SOMALIA)
Posted on July 11, 2016 by Voice Of Somalia Image
Magaalada Hargeysa waxaa ku geeriyooday Cabaas Idirs (Ex John Drysdale) oo ahaa khabiir caan ah oo muddo ka badan todobaatan sano ka soo shaqeeyay ama xiriir la lahaa dhulka iyo dadka soomaalida .
John Dry sdyle oo ahaa oday da’ weyn waxaa geeridiisa xaqiijisay goor Dhoweyd Edna Adam Ismaaciil maamulaha cisbitaalka Edna ee Hargeysa oo iyadu aad ula socotay mudooyinkii danbe xaaladda John dry sdyle .
John dry sdyle oo ku hadli jiray luqdda Soomaalida wuxuu dhawr iyo labaatankii sano ee u danbeeyay ku noolaa somaliland gaar ahaan Hargeysa iyo Gabilay . sida uu u sheegay beri sii horeysay wareysi uu la yeeshay weriyaha BBC ee Hargeysa Axmed Saciid Cige Joh Dry Sdyle wuxuu yimid somaliland 1943 , wuxuu noqday 1952 gudoomiyaha degmada laascaanood oo maamulkii ingiriiska , 1954 wuxuu noqday wakiilkii dawladda ingiriiska ee Jigjiga .
Markii Somaliya xoriyadda qaadatay 1960 wuxuu noqaday xoghayihii kowaad ee safaaradii Ingiriiska ee Muqdisho , kadib wuu ka tegay oo wuxuu la taliye u noqday ra’iisal wasaarihii somaliya ee xilligaasi Cabdirashiid Cali Sharma’arke . 1992 wuxuu noqday la-taliye hawgalkii qaramada midoobay ee Somaliya ee UNISOM , wuxuu sheegay inuu iskaga tegay oo ku qanci waayay siday wax u wadeen .
Kadibna 1993 wuxuu u soo wareegay gobolada waqooyi ee Soomaaliya uu uu la-taliye muddo u ahaa maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal . 1998 wuxuu Joh Dry Sdyle samastay hay’ad ka shaqeysa mashaariicda horumarinta ee somaliland . wuu islaamay dhawr sano ka hor wuxuuna la baxay magaca Cabbaas.
DAAWO:-Kacdoonkii Oromada oo sii Xoogaysanaya Maalinba Maalinta Ka Dambaysa.
Magaalo xeebeedka MARKA CADEEY oo Gashay Gacanta Alshabaab